Ukuphupha ngokuqhuba Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Namhlanje zininzi iindlela zothutho esinokuzisebenzisa xa siqhuba: imoto, ibhasi, indlela engaphantsi komhlaba okanye iS-Bahn, uloliwe nebhayisikile yimizekelo nje. Ngezi ndlela zokuhamba kunokwenzeka ukuba ufike kwindawo oya kuyo ngokukhawuleza kwaye kwakhona nangakumbi ngokukhululekileyo. Ngokuqhuba imoto okanye ukukhwela ibhayisekile, songa ixesha namandla esinokuwasebenzisela ezinye izinto ezibalulekileyo ebomini. Nangona kunjalo, ukusebenzisa iimoto ezihamba ngemoto, udinga iphepha-mvume lokuqhuba, iphepha-mvume lokuqhuba, ukuba ufuna ukuba semva kwevili ngokwakho. Umqeqeshi wokuqhuba emva koko ubonisa umfundi wakho onke amanyathelo afanelekileyo kunye nemithetho ekufuneka iqatshelwe kwisithuthi nakwindlela yokuhamba kwabantu.
Nangona kunjalo, kukho ingozi ehambelana nokuqhuba: iingozi zendlela zinokwenzeka apho abantu benzakala okanye babulawe. Ezi zihlala zisisiphumo sokungabi namava okanye ukungakhathali kwiimeko ezithile, njengaxa isibane esibomvu siphosiwe. Nangona kunjalo, namhlanje akunakwenzeka ukuba wenze ngaphandle kolu hlobo lwezothutho.
Ukuqhuba kukwadlala indima ekutolikeni amaphupha: abantu abaninzi baphupha ngokuqhuba okanye ngokuqhutywa ebusuku. Ngaba athetha ntoni la maphupha kwaye amele ntoni umfuziselo wephupha?
1 Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko ukuqhuba ephupheni kufanekisela okwakho Yiya phambili ebomini. Xa uphupha, ungathanda ukulungelelanisa kwakhona ubomi bakho kwaye ngokwexabiso "elingcono" emehlweni akho. Jonga utshintsho kwaye uyathemba ukuba lukwenza uzive ulunge ngakumbi.
Nangona kunjalo, xa utolika uphawu lwephupha, kufanele kuqatshelwe ukuba zeziphi iindlela zothutho umntu ophuphayo abonwa eqhuba: ngaba usemotweni? Kwibhayisekile? Kuloliwe okanye esikhepheni? Okanye mhlawumbi uqhuba imoto endala enetraki yomlilo? Imoto yamaphupha engaqhelekanga yitrektara ekhasa, kodwa ungaphupha nayo.
Ngokwenkcazo ngokubanzi, ukuqhuba emotweni kuhlala kuthetha amandla y ukuzimelaKwelinye icala, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibiliza ngesikhephe okanye ukutyibiliza ngesikhephe ngenxa yomnqweno wamaphupha wokufezekisa injongo yokuzikhethela kwaye ngaphandle koncedo lwangaphandle. Ufuna ukusebenzisa eyakhe imoto kwaye ahambe ngaphandle koncedo.
Nabani na oqhuba kodwa ngequbuliso akasenakuqhekeza usongelwa ngokuphulukana nolawulo ngokwenyani: umba usuka ezandleni zomphuphi. Ukuba, njengomntwana, uphupha ukuqhuba iqela lokudlala, njengemoto kaBobby, uhlala ufuna ukuqonda amathuba akho.
Ukuhamba ngomkhumbi ephupheni ngenqanawa kufanele kusoloko kulumkisa malunga nokwenza ngokungxama kwaye ungakulungelanga, ngelixa kuhlala kukho a isilumkiso Ifuzisela xa uzibona ushiya ngololiwe okanye uhamba: Umphuphi akufuneki ayilibale imeko yakhe yentlalo kwaye agcine unxibelelwano lomntu nangona kukho utshintsho oluzayo ebomini bakhe.
Ukuba siyangxama, sibaleke okanye sibaleke ephupheni, oku kungabonisa ukuba siziva sinoxinzelelo ebomini bokuvuka kwaye asisakwazi ukujongana nemisebenzi emininzi. Nangona kunjalo, ukuba siyarhubuluza ngokuthe chu okanye sirhuqa phambi kwethu, oku kubonisa imeko ekhululekileyo ebomini. Ukucotha ukuya kwindawo yokurhafisa kunokubonisa ukumisa okwethutyana kwindlela yobomi.
Ukuba umntu uqhuba itrektara enomatshini wokucheba ingca ephupheni, oku kungazisa utshintsho olulungileyo el mundo vuka. Umphuphi ngokwakhe uya kuzama ukufezekisa oku.
Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolikwa kwengqondo
Nokuba kutolikwa njani isimboli yephupha, ukuqhuba kubonisa into oyifunayo. utshintsho: Iphupha lingathanda ukuvela kubomi bakho bokwenyani. Ukuqhuba ubuye umva ephupheni kubaluleke kakhulu: imiqondiso engeyiyo xa uphupha ngoluhlobo lokuba ungalibali iingcambu zakho, ke kuya kufuneka uhlale ukhumbula apho uvela khona.
Ukongeza, oku kunokubandakanya isilumkiso sokuba isimilo sakho yiba mdala ungangeni kwiipateni zobuntwana. Ukuba uzibona uqhuba umva ephupheni, kuya kufuneka ujonge oku njengesicelo esivela kwi-subconscious yakho ukuze uphinde uqwalasele kwaye ujongane nezinto ezithile, ukuza kuthi ga ngoku ezingakhathalelwanga kwimiba yobomi bokwenyani.
Uphawu lwephupha «ubunye» - ukutolika kokomoya
Ngokwale nguqulelo, ukuqhuba ephupheni kufanele ukuba kufanekisela ulwalathiso lokomoya. Ukuphupha kuyaziqonda okwayo ukukhuthazwa ngokomoya Kwaye unokuhlengahlengisa ubomi bakho ngokufanelekileyo kwixa elizayo.